Torohevitra 10 momba ny fanavaozana ny toe-piainana tsara kokoa | Martech Zone
Torohevitra 10 momba ny fanavaozana ny toe-piainana tsara kokoa
Alarobia, Jolay 3, 2013 Alakamisy, Jolay 4, 2013 Douglas Karr
Rehefa mihamaro ny orinasa mandray sy manatsara ny paikadin'ny media sosialy dia mihasarotra kokoa ny fandrenesana ireo fanavaozana anao. Mpanohana goavana aho amin'ny fanombanana ny fanavaozana ny satany tsirairay amin'ny zavatra tsotra iray… sanda. Moa ve ny fampahalalana zarainao ho sarobidy amin'ny mpihaino anao? Raha izany dia manana mpandresy ianao.
Ny fanavaozana ny satananao no fiandohan'ny fahombiazanao amin'ny Facebook. Mety manana rindranasa tsara naorina sy atiny lehibe zaraina ianao fa raha tsy afaka mamaky ny hafatrao amin'ny fanavaozana ny toe-javatra maharesy lahatra ianao dia tsy hahatratra ireo mpampiasa anao araka ny itiavanao azy na mendrika azy. Ka ahoana ny fomba hitiavanao ireo mpankafy anao hitia, hifampiresaka ary hizara ny hafatrao?
Ity infographic, noforonin'i ShortStack ary miara-marika amin'ny Ilay hoditra mahia, manome toro-hevitra 10 sy ohatra haingana handefasana ny fanavaozana ny satanisa tsara kokoa.
Tags: fanavaozana ny satan'ny facebooktoerana ara-tsosialyfanavaozana ny satan'ny fiaraha-moninafanavaozana ara-tsosialyfanavaozana ny satan'ny
Iza ny mpividy B2B anao?
Tsy mitsoka ny fanoratana fa mila fanazaran-tena fotsiny
Serivisy MOS SEO
Jul 5, 2013 amin'ny 12: 20 AM